Sina mitsangana karazana Polymer PTFE Rod Round Bar Single Screw Extruder Machine PFMY600 Dia 20mm-500mm Mpanamboatra sy mpamatsy | SuKo
karazana mitsangana Polymer PTFE Rod Round Bar Single Screw Extruder Machine PFMY600 Dia 20mm-500mm
1. Toetran'ny PTFE （UHMWPE） Ram Rod Extruder PFB20
Amin'ny alàlan'ny fanatsarana tsy tapaka, ny fitaovana dia marani-tsaina kokoa, milamina kokoa ary mahomby kokoa.
Ny fitaovana dia fehezin'ny rafitra PLC, ary mandeha ho azy miaraka amin'ny fandidiana tsotra.
Miaraka amin'ny famolavolana samihafa, ny fitaovana dia afaka mamaly ny filan'ny mpampiasa isan-karazany, ary azo atokana ho an'ny mpanjifa.
Mihazakazaka maharitra ny fitaovana, miaraka amin'ny tabataba ambany. Ary mampihena ny vidiny amin'ny fitsitsiana herinaratra sy angovo mandritra ny fikojakojana ny tsindry.
Ny fitaovana sy ny bobongolo dia vita amin'ny teknolojia manokana, fanoherana ny harafesina, mateza ary miaraka amin'ny androm-piainana maharitra.
Tsotra ny famolavolana fitaovana ary tsy mitaky toerana firy.
Ny vokatra Extruded dia manana fahombiazana avo lenta amin'ny lafiny hakitroka sy tanjaka mihombo.
Vita amin'ny rafitra famahanana mandeha ho azy, mameno siny 50-80 kg, ny rafitra famahanana mandeha ho azy dia afaka miantoka 4-8 ora fiasana ary mitahiry vola be amin'ny mpiasa.
PTFE ram ram-extruder dia afaka manosika tsorakazo hatrany ary ny tsorakazo dia azo tapahina arakaraka ny fepetra takiana.
Omeo rafitra bobongolo feno, izay misy kojakoja mifangaro mifanaraka amin'izany, rafitra fanafana sy fanamafisam-peo, rafitra fanamafisana, mpanara-maso ny mari-pana, fonosana sns.
Ny extruder tsorakazo mitsangana mivoaka avy any ambony ka hatrany ambany. Ny fitaovana dia azo apetraka amin'ny rihana faharoa na lampihazo.
2. Fepetra ilaina amin'ny tontolo iainana miasa
Ny tany misy ny tranokala dia takiana amin'ny haavony, ary ny vesatry ny tranokala dia tsy latsaky ny fepetra takiana amin'ny famolavolana.
Mila sehatra madio ny sehatra fandidiana hampihenana ny fidiran'ny vovoka. Ny tsara indrindra dia ny misy fantson-drivotra ao amin'ny atrikasa hanamorana ny rivotra.
Ny herinaratra indostrialy 380V 50Hz 3P, ny voltage dia azo alamina mifanaraka amin'ny filan'ny mpampiasa.
Ny ozinina dia miaraka amina kabinetra fizarana herinaratra, rivotra voafintina ary fitaovana manohana hafa.
Ny fitaovana dia tokony hampiana miaraka amin'ny rafitra mangatsiaka. Tavoahangy roa / tanky rano azo ampiasaina miaraka amina paompy mangatsiaka hamerenana ny loharanon'ny rano.
Ny mari-pana ao amin'ny efitrano dia tokony tsy mihoatra ny 28 ° C.
Ny fitaovana extrusion mitsangana mivoaka avy any ambony ka hatrany ambany. Ny fitaovana dia apetraka eo amin'ny lampihazo na amin'ny gorodona miaraka amin'ny haavony 2,8 metatra eo ho eo. Ny elanelam-bidy mahomby amin'ny làlan-kizorana lava an'ny fitaovana dia mila dinihina, ary ny halavany ampy dia tsy maintsy omena toky eo ambanin'ny lavaka boribory raikitra amin'ny fitaovana hahafeno ny fepetra takian'ny halavan'ny tsoraka PTFE esorina.
Ireo fitaovana fampitrandrahana marindrano dia mila mandinika ny halaviran-dàlana mahomby amin'ny làlan'ny marindrano an'ireo fitaovana, ary ilaina ny miantoka ny halavan'ny tsorakazo PTFE. Ny fitaovana dia misy halavan'ny bobongolo 4-7 metatra (tsy ankanavaka ny halavan'ny tsorakazo vita ivelany), ny sakany 1,2 metatra, ny haavon'ny 1,8 metatra.
3. Fitaovana Parameter
Modelin'ny milina PFLB20 PFB80 PFB150
Process Fanesorana mitsangana Fitrandrahana marindrano
Power KW (Motera elektrika) 14 24 33
Ny halavan'ny tsorakazo Tohizo ny fivoahana miaraka amin'ny halavany tsy voafetra
-maso PLC + efijery mikasika PLC + efijery mikasika PLC + efijery mikasika
TOSIKARATRA / PH / Hz 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P
Fanjifana herinaratra (KW / h) 2+ 2.5+ 3+
Faritra maripana 3-5 4-8 8-12
Milanja lanja (Kg) 930 960 1220
Haavo Machine (mm) 2150 1800 1900
Faritra velaran'ny masinina (m2 ) 3.5 7 10
hamolavola Ny haben'ny bobongolo dia namboarina mifanaraka amin'ny fanamarihan'ny mpanjifa. Ny famolavolana bobongolo feno dia misy ny vatan'ny bobongolo, lohan'ny fantsom-panafody, flange fifandraisana, andiana peratra fanafanana hafanana avo lenta, setroka sensor iray manontolo, rafitra palitao rano mihena, ary ny tsipika fifandraisana misy hafanana be, ny bobongolo ary ny fanohanan'ny vokatra. Ny farany vita dia raisina manokana ho malama, mateza ary tsy mahazaka harafesina. Ny hatevin'ny landihazo insulate dia mihoatra ny 5mm, ary ny hatevin'ny hafanana dia mihoatra ny 10mm.
4. Tabilao fametrahana sy fampidirana bobongolo
5. Fitaovana sy fikolokoloana bobongolo
Zahao tsy tapaka ny haavony, ny fahadiovany ary ny hafanan'ny solika hydraulic.
Manolo-kevitra ny hisolo ny menaka hydraulic isaky ny enim-bolana.
Ny tombo-kase tonta dia nosoloina ara-potoana.
Tokony hodiovina sy hotehirizina ara-potoana ny lasitra ary tokony hosaronina menaka miaro manify ny faritra amboniny.
Tano tsara ny sensor momba ny mari-pana amin'ny coil fanafanana ary tahirizo tsara.
6. Famaritana sy kojakoja momba ny kojakoja
Ny fitaovana dia misy milina lehibe, tobin-tsolika iray, kabinetra fanaraha-maso, feeder mandeha ho azy, mpitazona, lavaka fanamainana, bobongolo ary kojakoja hafa. Ny kojakoja ilaina amin'ny fitaovana ilaina dia alefa amin'ny mpanjifa miaraka amin'ny fitaovana.
Ny lisitry ny kojakoja ilaina amin'ny fitaovana dia alefa any amin'ny mpampiasa miaraka amin'ireo fitaovana.
Rehefa mividy ny fitaovan'ny orinasanay ny mpampiasa, ankoatry ny kojakoja ilaina dia hanome ireo kojakoja ilaina amin'ny mpampiasa izahay hanoloana sy hanamboatra ireo fitaovana. Ny kojakoja dia ampahany mahazatra ary azo vidiana amin'ny tsena eo an-toerana.
Noho ny teknolojia manokana an'ny fitaovana dia afaka mandeha any amin'ny orinasa ny mpanjifa hianatra momba ny fametrahana, ny fanendrena, ny fandidiana, ny fanovana ny bobongolo, ny fikojakojana, ny fitarihana ny fizotran'ny fitaovana maimaimpoana alohan'ny fanaterana.
Raha tsy afaka manatona ny orinasanay izahay hianatra noho ny fahasahiranana toy ny elanelana, ny mpiasa, ny fotoana, afaka mandamina injeniera izahay mba hitarika ny fametrahana, ny fanendrena, ny fiasa, ny fanoloana ny bobongolo, ny fikojakojana ary ny fitarihana ny fitaovana eo ambanin'ny ny fifanarahan'ny ankilany.
Afaka mitarika fitarihana lavitra ihany koa isika. Ny mpampiasa dia afaka misafidy fomba hafa toy ny telefaona, horonan-tsary, mailaka, sns., Hianarana momba ny fametrahana fitaovana, fanirahana, fiasana, fanovana bobongolo, fikojakojana, fitarihana, sns.
8.After Service Sales
Hatramin'ny andro nahazoana ny masinina, herintaona ny vanim-potoana fiantohana ny kojakoja rehetra ao amin'ny milina. Manome serivisy fitarihana fikojakojana maimaimpoana izahay mandritra ny vanim-potoana fiantohana.
Raha misy olana amin'ny kojakoja ivelan'ny vanim-potoana fiantohana dia mifandraisa aminay ara-potoana mba hanazavana ny olana, ary hanome vahaolana manaraka izahay ao anatin'ny 24 ora.
Raha manana mpizara eo an-toerana isika dia afaka mifandray amin'ny mpizara any an-toerana mba hiara-miasa.
Ny fanontaniana rehetra momba ny fitaovana dia azo anontaniana aminay amin'ny alàlan'ny paositra, horonan-tsary, telefaona, sns.
Telefon-serivisy ： + 86-0519-83999079
9.PTFE Rod Line Fitaovana Famahanana mandeha ho azy
Famahanana mandeha ho azy ny vacuum, ao anatin'izany ny rafitra tsofina miverimberina mifamadika, manomboka ny rafitra fahanana, manasa fantsom-basy, basy hisoka, mpamokatra fantsona, mpanamory PCB, famoahana 30-300 kg / h, savaivony 150mm ary hahavony 600mm, mametraka fotoana fisakafoana mandeha ho azy sy fotoana fandefasana, vovoka Ny flow dia azo fehezina, ny famokarana vy tsy misy fangarony, ny fifehezana manan-tsaina. Ny barika fampifangaroana dia 600mm ny savaivony ary 700mm ny hahavony, miaraka amina motera mihena 2.2kw, hafainganam-pandeha 15-25 mihodina / min, lovia ambany 8-10mm ambany, ary 75-90kg ny fahaizany.
Lisitry ny fanitsiana SKVQC-10:
Anarana No. Brand / Manufacturer
Generator vacuum 1pcs Shina
316L sivana vy tsy misy fangarony 4pcs Shina
Hopper vacuum (vy vy 304) 1set Suko
Rafitra mitsoka mihodina miverimberina Valizy eo an-damosina 1set Novely zelandy
Fizarana pneumatika AirTAC
Rafitra fanariana rivotra 1set Shina
Rafitra fanaraha-maso Birao Pc 1set Suko
Fanodina famatsiana herinaratra 1pcs Shina
Valizy Solenoid 1pcs AirTAC
Fantsom-pifandraisana (Φ25) fantsom-bokatra vy nohamafisina 3M Alemaina
Stainless vy minono (Φ25) 1pcs L 350mm
Barika vy 1pcs OD600mm; H700mm
MODELY Fanjifana rivotra voahidy Faneren'ny rivotra
12. Fitaovana tsy voatery mifandraika
Anarana Famaritana fohy
Lafaoro vita amin'ny vovon-tsakafo PTFE Sinter PTFE hery
Crusher fanakanana PTFE Atsofohy amin'ny heriny ilay vongana
Masinina vovoka sivana elektrika Manala vovoka alohan'ny afangaro
Recycled fitaovana famotehana tsipika Dicer, milina fanasan-damba, crusher
Mpangaro vovoka / mpangaro vovoka & mpanampy Afangaroy amin'ny vovo-dronono ny menaka manitra
Masinina fanapahana bara hidrolika Hetezo tsorakazo lehibe raha ilaina
Azafady mba mifandraisa aminay amin'ny fitaovana fanodinana PTFE hafa.
Manaraka: Extruder Machine milina polymer PTFE Rod Ram PFB150 Dia 80mm-150mm
ny Adam Danyal :
milina voaray araka ny nandrasana.
ny Nathanial Washington :
Serivisy haingana be
ny Kayla Eckley :
Toa manana vidiny lafo be ry zareo miaraka amin'ny vokariny.
1 2 3 … 6 Manaraka "
Tsindrio eto raha hanafoana ny valiny.
Manorata hevitra eto:
Ny mailakao *
Naoty kintana *